Horudhac: Everton vs Chelsea… (Toffees oo halis ugu jirta inay u laabato horyaalka heerka labaad & Blues oo guuldarro la’aan ah kulammada ay ciyaartay…) – Gool FM
Horudhac: Everton vs Chelsea… (Toffees oo halis ugu jirta inay u laabato horyaalka heerka labaad & Blues oo guuldarro la’aan ah kulammada ay ciyaartay…)
Ahmed Nur May 1, 2022
(Liverpool) 01 Maajo 2022. Kooxaha kubadda cagta Everton iyo Chelsea ayaa galabta daaha ka rogaya kulammada horyaalka Premier League ee maanta iyadoo Toffees ay halis ugu jirto inay usii badato dhanka u laabashada horyaalka heerka labaad ee kubadda cagta Ingiriiska.
Kooxda Everton ayaa ku jirta kaalinta 18-aad ee kala sarreynta horyaalka dalka England iyadoo leh 29 dhibcood, balse waxay heysataa kulan baaqi ah iyo midka ay maanta ciyaareyso halka Blues ay ku jirto kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka iyadoo leh 66 dhibcood.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 04:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika
Everton weeraryahankeeda Dominic Calvert-Lewin ayaa kusoo laabtay safka kooxda kaddib labo ciyaarood oo uu dhaawac ku maqnaa, sidoo kale Yerry Mina ayaa taam u ah kulankan kaasoo keydka fadhiyay ciyaartii Liverpool.
Dhinaca kale, Chelsea ayaa qiimeyneysa xaaladda difaaceeda Andreas Christansen kaasoo kulammadii lasoo dhaafay xanuun dhanka caloosha ah kaga maqnaa, sidoo kale, Mateo Kovacic ayaa kasoo kabanaya dhaawac balse taam uma ahan kulankan halka Ben Chilwell iyo Callum Hudson-Odoi ay iyaguna wali dhaawacan yihiin.
Everton ayaa hammineysay inay afar guul oo xiriir ah kaga gaarto garoonkeeda naadiga Chelsea markii ugu horreysay tan iyo 1973.
Chelsea ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay toddobo ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyay ee ay horyaalka kaga hor tagtay Everton.
Kooxda Macallin Thomas Tuchel ayaa adkaatay kaliya saddex ka mid ah 13-kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka oo ay kusoo ciyaartay garoonka Goodison Park waxayna barbarro soo gashay labo jeer halka siddeedda kalena lasoo garaacay.
Kooxda lagu naaneyso Toffees macallinkeeda Frank Lampard ayaa ah gool-dhaliyaha ugu sarreeya naadiga Chelsea isagoo u dhaliyay 211 gool kaddib 648 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Chelsea ayaa guuleysatay dhammaan afarteedii ciyaarood ee hore oo ay horyaalka Premier League ciyaartay 1-da bisha May.
Horudhac: West Ham United vs Arsenal... (Hammers oo soo dhoweyneysa kooxda ay kala kulantay guuldarrooyinka ugu badan Premier League)